« Podium », Afomanga, Matso : Afa-po ny rehetra ! -
AccueilRaharaham-pirenena« Podium », Afomanga, Matso : Afa-po ny rehetra !
Ambohi-pihaonana. Hipoka tanteraka i Mahamasina tamin’ny faradoboky ny Podium omaly izay nahitana ireo mpanakanto sangany ary anisan’ny be mpankafy. Nilamina rahateo ny fampisehoana noho ireo fepetra samihafa ho fitandroana ny filaminana. Mpanakanto maromaro no nantsoin’ny kaomity mpikarakara ny fankalazana ny fetim-pirenena hanafana izany. Nisolo sy nandray ny ampaham-potoanan’ireo mpanakanto tsy tonga anefa ny tarika Nina’s izay namarana ny fampisehoana omaly. Saika noteteziny tamin’ity fampisehoana ity ireo hira rehetra nahafantarana azy tao anatin’ny 5 taona niakarany an-tsehatra ka tao anatin’izany ireo hira vaovao izay efa tafita sahady any amin’ireo mpankafy toy ny « Mankasitraka », « Solonao vaovao », « solonao vaovao »… Iny rahateo no anisan’ny seho goavana ataony eto an-drenivohitra ao anatin’ny fankalazany ny faha-5 taona niakarany an-tsehatra. Na dia vaorakitra tao anatin’ny fandaharam-potoana aza ny fiakaran’i Melky, dia tsy tonga teny an-toerana mihitsy izy. Tara loatra kosa vao tonga teny an-toerana i Tsiliva ka tsy afaka niakatra ny sehatra intsony.
Nifandimby naneho ny talentany sy nanome fahafaham-po ireo vahoaka marobe tonga teny Mahamasina mialoha izany ireo mpanakanto izay samy manana ny gadona vohiziny. Nisantatra izany ny r’n’b niarahana tamin’i Marion ary nitondrany ireo hira tsy afaka ambavan’ireo mpankafy azy indrindra ireo hiaka farany toy ny « Rehefa love ». Niantsoroka ny fanentanana sy nanolotra ireo mpanakanto hiaka-tsehatra i Françis Turbo. Nahazo sitraka tamin’ireo mpijery ihany koa ireo hira noentin’ireo andriambavilanitra mahafatifaty ao anatin’ny tarika Tif à Tif. Ny fiangaliana ny sanganasan’ireo mpanakanto malagasy malaza kosa no nentin’ny Orkestra Diap Capsat.
Mialoha ny teo Mahamasina, nanomboka ny 21 jona teo dia toerana maro samihafa no efa nanolorana fampisehoana samihafa ka anisan‘ireo nisongadina tamin’ iny faran’ny herinandro iny ny tetsy amin’ny Kianjan’i Maki Andohatapenaka nahitana an-dry Da-Hopp, Miary Vibration, Jean-Aimé, Onja ary Dah Mama. Teny Anosizato kosa ry tarika Ny Ainga, Mage 4, Oladad, Maroloko, tarika Miandry ary Raozin’i Gasikara. Tsy adino ny teny Sabotsy Namehana Tence Mena, Kiaka, Samoëla, Ndondolah ary Randrianasolo Raymond.
Mikasika ny Matso lehibe tao Mahamasina ihany koa, dia afa-po ny rehetra. Nilamina ny fanatrehana an’izany. Ny harivan’iny ihany koa dia afa-po tamin’ny fijerena “afomanga” ny vahoaka. Naharitra teo amin’ny adin’ny iray teo ny fanarahana an’izany teo amin’ny farihin’Anosy. Ny nampiavaka ny fanatrehana ny fetim-pirenena tamin’ity taona ity, dia noho ny fidiran’ny mpitandro ny filaminana antsehatra nandamina ny tany anaty olona rehetra tany, ankoatra ny fampiasana ny teknolojia avo lenta ( camera de surveillance sy Drône).